FBC - Proojaktoonni jajjaboon biyyattiin ijaartu amma galii argamsiisuu eegalanitti liqaan mootummaan fudhatu dhala xiqqaan akka ta’u beeksise
Proojaktoonni jajjaboon biyyattiin ijaartu amma galii argamsiisuu eegalanitti liqaan mootummaan fudhatu dhala xiqqaan akka ta’u beeksise
Finfinnee, Hagayya 5,2009(FBC) -Proojaktoonni jajjaboon biyyattiin ijaartu amma galii argamsiisuu eegalanitti liqaan mootummaan fudhatu dhala xiqqaa qofaan akka ta’u murtaa’uusaa Ministeerri Maallaqaa fi Walta’umsa Diinagdee beeksise.
Ammeentaan liqaa biyyattii oomisha waliigalaatin walcinaa qabamee yammuu ilaallamu, jiddu galeessa kan jedhamu yammuu ta’u, kanas gara sadarkaa xiqqaatti ceesisuuf mootummaan liqaa raawwatu dhala xiqqaa qofaan taasisuun barbaachiseera.
Akka ragaa Baankii Addunyaatti biyyi takka oomisha waliigalaarraa %56n liqaa yoo ofirraa qabaatte diinagdeen ishee balaadhaf kan hin saaxilamne waan ta’eef, liqaa argachuu akka dandeessu kaasa.
Haaluma kanaan liqaan Ityoophiyaan ofirraa qabdu oomishashee waliigalaarraa %30 waan ta’eef sadarkaan liqaashees fayya qabeessa jedheera ministeerichi.
Gama birootin waliigaltee kanaan dura seenten bara 2009 liqeessitoota biyya keessaaf Birrii biiliyoona 5, kan alaaf ammoo Birrii biiliyoona 6; waliigalaan Birrii biiliyoona 11 deebisuun ishee humna liqeeffachuushee muul’isa.
Bara baajataa 2009 qindoomina mootummaa fi dhaabbilee faaynaansii irraa liqaan kan waadaa galame Birrii biiliyoona 98.876 yammuu ta’u, milkaa’inni isaas Birrii biiliyoona 78.832.
Kunis biyya keessaf liqaa Birrii biiliyoona 7 yammuu ta’u, kan alaaf ammoo Birriin biiliyoona 9 akkaataa waliigalteetin kaffalameera.
Sadarkaan liqaa biyyattii Doolaara Ameerikaa biiliyoona 23 ta’ee, kanaan itti fufnaan sadarkaa liqeeffattuu olaanaatti waan ceetuf, liqaa xiqqaa fayyadamtuun itti fufuun barbaachiseera.
Oduuwwan Biroo « Ityoophiyaan fudraa fi mudraarraa 1% qofa gabaa alaaf dhiyeessaa jirti	Gabaan Oomishaa baatii Adoolessaatti gabaa oomisha Birrii biliyoona 1.1 geggeesse »